नयाँ मोडमा पुग्यो एमाले-माओवादी एकता, वामदेवले गरे यस्तो प्रस्ताव ! — Imandarmedia.com
आज : २०७५ बैशाख ११ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
नयाँ मोडमा पुग्यो एमाले-माओवादी एकता, वामदेवले गरे यस्तो प्रस्ताव !
एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले माओवादीलाई अध्यक्ष र एमालेले महासचिव लिएर भए पनि पार्टी एकता गर्नुपर्ने मोडालिटी प्रस्ताव गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्र र जनताको आवश्यकतानुसार आफूले जस्तोसुकै राजनीतिक निर्णय लिन सक्ने भनाइलाई अर्को अर्थ नलगाउन आग्रह गरेका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
नेपालीको प्रतिव्यक्ति ऋण दुई हजार बढीले थपियो
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादवको घरमा बम बिस्फोट
ठिमी नगरपालिका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठमाथि स्थानीयद्वारा आक्रमण